Thunderstruck II waa ciyaar booska ku salaysan caddooyinka ku Norse ah oo horumarsan by Microgaming. horreeyay ee ciyaarta this – Thunderstruck, waa mid ka mid ah boosaska ugu caansan in la abuuray abid. Tani cidhibta ka Microgaming xajisto badan oo nuxurka kulanka asalka halka hagaajinta in badan oo siyaabo arrin. Hall Great ee dhigeeysa bonus wareega iyo feature wildstorm labadaba waa xiiso leh iyo dhawri doonaa ciyaaryahanka ay suulasha. Waxaad ciyaari karo kulankaan on mobile site naadi deposit.
Microgaming waa shirkad ciyaarta Afyare a horumarinta ku salaysan oo ka mid ah Isle of Man jasaa'irka Ingriiska. Waa hay'adda ugu weyn ee kulan Afyare iyo technology la xiriira casinos guud ahaan UK waxay ka badan 20,000 mashiinada hadda howlgal. Dad badan oo iyaga ka mid ah waxaa laga heli karaa mobile site naadi deposit.
Thunderstruck II waa video booska online in uu leeyahay 5 duntu iyo 243 paylines. waxaa Play on mobile site naadi deposit. Afyare waxaa lagu ciyaari karaa sida ugu badan ee 15 £ per wareejin. Kulanka waa mid ka yar kacsan marka loo eego classic la magac isku mid ah iyo wax badan oo dheeraad ah oo ku madadaalo. The theme Norse Mythological ayaa xunna lagu daro naqshadeynta sidaas samaynta kulankaan dawayn muuqaal ah.
Ilaa hadda sida play ciyaarta waxaa loo arkaa, ma aha oo kaliya oo dhan ku saabsan kulan gunno la mid ah inta badan boosaska kale. ciyaarta saldhig waa xiiso leh oo ku filan leh wax badan oo guulo yar yar ee soo socda ilaa xad si joogto ah. Waxa kale oo jira Ghanna a mini of 1000x in la guuleystay in ciyaarta salka.
Markaas waxaa jira Wildstorm feature taas oo aan kala sooc lahayn kiciyay. Halkan waxaad ka heli mid ka mid wareejin free laakiin qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan in ay jirto fursad ah in dhammaan shanta duntu ka leexdo duurjoogta ah sidaas sii kordhaya fursadaha caga kaga badiyeen aad.
Hall Great ee dhigeeysa waa feature ugu fiican. Waxaa jira 4 heerarka kala duwan iyo habkaani inay waxaa keena degtey 3 ama in ka badan calaamadaha kala firdhiso on duntu ah. Waxaa laga yaabaa inaad hesho inta u dhaxaysa 10 in 25 dhigeeysa free oo ay la socdaan gunno ku xiran heerka aad ku sugan tahay.
Waxa kale oo jira astaan ​​banjoog ah oo u dhaqmo sida bedelkiisa oo dhan calaamado kale oo ku kala firdhi, marka laga reebo.
Sidaas, bilaabo on a site, naadi deposit mobile.
Tani sida ay horreeyay ayaa kulan booska aad loo jecel yahay. Ciyaarta waa raqiis on jeebka, laakiin waqti isku mid ah bixiyo baxay fiican. Tani waa laga yaabaa sababta ay booska tani waxay leedahay wax badan sawaxanka. Hel in a site, naadi deposit mobile iyo bilaabaan daadgureyntaasi.
Banking | Pay Casino by Phone oo More!